ထိုင်းက နေရပ်ပြန်ဝင်လာသူများလို့ ကိုရိုနာ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မား၊ နေအိမ်တွေမှာပဲ သီးသန့်ထားဖို့ အစိုးရ ဆုံးဖြတ် အပါအဝင် ထိပ်တန်းသတင်းများ
ထိုင်းက နေရပ်ပြန်ဝင်လာသူများလို့ ကိုရိုနာ ဖြစ်နိုင...
23 มี.ค. 2563 - 09:58 น.
ဒီရက်ပိုင်း ထိုင်းကနေ မြန်မာကို ပြန်လာတဲ့ နေရပ်ပြန်မြန်မာလုပ်သားတွေ အလွန်များတဲ့အတွက် သူတို့ကို သတ်မှတ်နေရာမှာ အသွားအလာကန့်သတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လို့ သက်ဆိုင်ရာနေအိမ်တွေမှာပဲ စောင့်ကြည့်မယ်လို ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောပါတယ်။
မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးဗဟိုအဆင့်အစည်းအဝေးမှာ ဝန်ကြီးက ပြောခဲ့တာပါ။
မြန်မာအစိုးရဟာ ထိုင်းကပြန်လာတဲ့ မြန်မာလုပ်သားဦးရေ အလွန်များတာကြောင့် သီးသန့်နေရာမစီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အခုလို မိမိတို့နေအိမ်တွေမှာသာ ၁၄ ရက်ကြာ သီးသန့်စောင့်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုဗစ်၁၉ ဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၅ နိုင်ငံကို ကူးစက်နေပြီး ဒီရက်ပိုင်း ထိုင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြား ပြည်တွင်းကို ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်လို့ ရောဂါဝင်ရောက်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေ ပိုမိုမြင့်မားလာတယ်လို့ ဝန်ကြီးက ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူတို့အတွက် အစိုးရက သီးသန့်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာ အသွားအလာကန့်သတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ နေအိမ်တွေမှာ home quarantine ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို ဆောင်ရွက်ရာမှာ သတ်မှတ်ချက်တွေကို အသိစိတ်ဓာတ်ရှိရှိနဲ့ တိတိကျကျလိုက်နာပြီး ၁၄ ရက်ကာလအထိ အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်နေထိုင်ကြဖို့ လည်း ဝန်ကြီးက တိုက်တွန်းပါတယ်။
ဒါမှ ရောဂါဖြစ်ပွားတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်း ကုသမှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကိုယ့်မိဘ၊ ဆွေမျိုးနဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေကို ရောဂါမကူးစက်စေဖို့ ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နေအိမ်မှာ အသွားအလာကန့်သတ်နေထိုင်သူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ နေ့စဉ် မဖြစ်မနေ သတင်းပို့ရပါမယ်။ လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေ လုပ် မလုပ်ကို ထွေအုပ်နဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေက ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဟိုတယ်တချို့ကို quarantine နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်စီစဉ်ထားပြီး တချို့ကို ဟိုတယ်တွေမှာ စထားနေပြီလို့လည်း ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာသံတမန်တွေ၊ ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ မိမိတို့သက်ဆိုင်ရာ နေရပ်ကို ပြန်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါ ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်ကိုလည်း မြန်မာအစိုးရက စီစဉ်ပေးတော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တရုတ်၊ တောင်ကိုးရီးယား၊ အီတလီအပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၆ နိုင်ငံကို မြန်မာက ပြည်ဝင်ခွင့်တွေကန့်သတ်ထားသလို အဲဒီက လာတဲ့သူတွေအားလုံးကို ၁၄ ရက် ကြာအစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ သီးသန့်စောင့်ကြည့်နေရာတွေမှာ ထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
မတ်လ ၂၁ ရက်က စတဲ့အဲဒီအစီအစဉ်မှာ သီးသန့်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ လှည်းကူးက ကျန်းမာရေးစင်တာမှာ အဆင်မပြေမှုတချို့ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီမှာ စောင့်ကြည့်ခံရသူတွေရဲ့ တင်ပြချက်ကြောင့် မှော်ဘီက ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ဓမ္မဒူတ ဆေကိန္ဒာရာမကျောင်းတိုက်ကို မနေ့က ညပိုင်းက ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ လူ ၄၀၀ ကျော်ကို ဆရာတော်ရဲ့ ကျောင်းဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့တွေနဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းတွေ ပူးပေါင်းပြီး ကူညီစောင့်ရှောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေ ပြန်ဝင်လာတဲ့ မြန်မာလုပ်သားတွေကတော့ များပြားလွန်းလို့ ခုလို သက်ဆိုင်ရာနေအိမ်အသီးသီးမှာပဲ ၁၄ ရက်ကြာအိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲ နေဖို့ အစိုးရက ပန်ကြားထားပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမှာ မြန်မာလုပ်သားတွေ ပြန်မလာသင့်ဘူးလို့ ဝေဖန်တာတွေရှိသလို မိမိနိုင်ငံသားတွေ ပြန်လာတာကို မတားမြစ်စေချင်ကြောင်းနဲ့ ရောဂါကာကွယ်ရေးတွေကို ဒီထက်အရှိန်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း လူမှုကွန်ရက်သုံးသူတွေကြား ဆွေးနွေးပြောဆိုနေကြပါတယ်။
(၂) ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် အမှတ် ၂ ချစ်ကြည်ရေးတံတားပြန်ဖွင့်၊ ကုန်သယ်ယာဉ်နဲ့ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးသာ ဖြတ်ခွင့်ပြု
ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ် အမှတ် ၂ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကို ဒီနေ့ မတ်လ ၂၃ ရက်မှာ ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတွေဖြတ်သန်းခွင့်မရှိပါဘူး။
အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အညီ ခွင့်ပြုချက်ရရှိတဲ့ ကုန်စည်တင်လာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်နဲ့ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကိုပဲ ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုမယ်လို့ တာချီလိတ်မြို့ခရိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
တာချီလိတ်ဒေသတွင်း စားသောက်ကုန်နဲ့ တခြားကုန်ပစ္စည်းတွေ မပြတ်လပ်စေဖို့ အမှတ် ၁ ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှာ အရင်က နေ့စဉ်ဖြတ်သန်း သယ်ဆောင်နေတဲ့ လူသုံးကုန်နဲ့ စားသောက်ကုန်ကို အမှတ် ၂ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကနေ အခွန်ပေးဆောင်ပြီး သယ်နိုင်ဖို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေတယ်လို့လည်း ပါရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် တာချီလိတ်ဒေသတွင်း ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ပြီးရောင်းချတာမလုပ်ဖို့နဲ့ စားသောက်ကုန်တွေလူသုံးကုန်တွေကို အစောတလျင် ဝယ်ယူတာတွေ မလုပ်ဖို့ ပြည်သူတွေကို အသိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ထိုင်းမြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတား အမှတ် ၁ ကို မတ်လ ၂၀ ရက်တည်းက ပိတ်လိုက်တာကြောင့် နေရပ်ပြန်ချင်တဲ့ မြန်မာလုပ်သားတွေဟာ အမှတ် ၂ ချစ်ကြည်ရေးတံတားကနေ နေ့စဉ် ထောင်ချီဝင်ရောက်လာကြပါတယ်။
အခု ချစ်ကြည်ရေးတံတား အမှတ် ၂ ကိုပါ ပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီး နှစ်ဘက် ညှိနှိုင်းမှုအရ ကုန်ပစ္စည်းတစ်နိုင်တစ်ပိုင် သယ်လာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်နဲ့ ယာဉ်မောင်းတစ်ဦးကိုပဲ ပေးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းမှာ နေထိုင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မြန်မာလုပ်သား လေးသန်းကျော်ရှိပါတယ်။ အခုအခါ ထိုင်းက မြန်မာနဲ့နယ်စပ်တစ်လျှောက် ဂိတ်တွေကို မတ်လ ၂၃ ရက် ဒီကနေ့စပြီး ပိတ်တော့မှာမို့ ဘန်ကောက်အပါအဝင် ဒေသအသီးသီးကနေ နေရပ်ပြန်လာကြမယ့် မြန်မာတွေ နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာ ပိတ်မိနိုင်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာအလုပ်သားသံအရာရှိရုံးက သတိပေးထားပါတယ်။
(၃) ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် အန်ဂလာမာကယ် သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်
ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် အန်ဂလာမာကယ်ဟာ သူ့ကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးတဲ့ ဆရာဝန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နေကြောင်း တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ သူ့ဘာသာ သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်လိုက်ပါတယ်။
သောကြာနေ့က ဝန်ကြီးချုပ်ကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန်မှာ ကိုဗစ်၁၉ ကူးစက်ခံနေရတာကို စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးတဲ့နောက်မှာ အခုလို သီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ CNN သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ခုလို သီးသန့်နေထိုင်ချိန်အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှုရှိမရှိ ဆေးစစ်မှုခံယူမယ်လို့ အစိုးရပြောခွင့်ရသူ စတက်ဖင်ဆီးဘာ့ထ်က မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်မှုတွေ ဘယ်တော့ ရပ်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေ သုံးသပ်ထားလဲ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးရေးအတွက် တရုတ်ဘီလီယံနာ ဂျက်မားက အမေရိကန်ကို လှူဒါန်း
ဝန်ကြီးချုပ် အဲဒီလိုသီးသန့်ခွဲခြားနေထိုင်ပြီးတဲ့နောက် ဂျာမနီမှာ လူနှစ်ဦးထက် ပိုမစုဝေးဖို့နဲ့ လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လေးပေ ခန့်အကွာကနေ တွေ့ဆုံဖို့ ကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်။
ဂျာမနီမှာ ကိုဗစ်၁၉ ကူးစက်ခံရသူ နှစ်သောင်းကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၉၀ ကျော် ရှိနေပါတယ်။
(၄) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ သုံးသိန်းကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ တစ်သောင်းခွဲနီးပါး ရှိလာ
ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၃၃၅,၀၀၀ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၁၄,၆၀၀ ကျော် ရှိလာပြီလို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ သုတေသနပြုချက်က ဆိုပါတယ်။
အီတလီမှာ မနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ သေဆုံးသူ ၆၅၁ ဦးကြောင့် စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ ၅,၄၇၆ ဦးရှိသွားပါပြီ။ အီတလီဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ သေဆုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်စပြန့်ခဲ့တဲ့ တရုတ်မှာတော့ သေဆုံးသူ ၃,၀၀၀ ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနေ့ကတစ်ရက်မှာတော့ အီတလီဟာ သေဆုံးနဲ့ ကူးစက်နှုန်းအနည်းငယ် ပြန်ကျလာနေပါတယ်။
ဗိုင်းရစ်ကြောင့် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး အလုပ်သမားတွေလည်း နေရပ်အသီးသီး ပြန်နေရကြပါပြီ။
ကနေဒါကလည်း ဂျပန်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေဆီ သူတို့အားကစားအသင်းတွေ စေလွှတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
အစောပိုင်းတုန်းက ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးက အိုလံပစ်အားကစားပွဲတော်ကို မလွဲမရှောင်သာ ရွှေ့ဆိုင်းရတာမျိုး ရှိလာနိုင်တယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
အိုလံပစ်အားကစားပွဲကို မရွှေ့ဘူးလို့ ဝန်ကြီးချုပ်က အရင်က တောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့တာပါ
နယူးဇီလန်မှာလည်း ဒီတစ်ပတ်ကစလို့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကို ပိတ်ပင်ကန့်သတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
သြစတြေးလျမှာလည်း ဘီယာဆိုင်တွေ၊ ကလပ်တွေ၊ အားကစားခန်းမတွေနဲ့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲတွေကို ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
တရုတ်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနှစ်ရက်ပေါင်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူအသစ် ၈၅ ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ထိုင်းက နေရပ်ပြန်ဝင်လာသူများလို့ ကိုရိုနာ ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မား၊ နေအိမ်တွေမှာပဲ သီးသန့်ထားဖို့ အစိုးရ ဆုံးဖြတ် အပါအဝင် ထိပ်တန်းသတင်းများ